किन हुन सकेन मेस्सी र बार्सिलोनाबीच सम्झौता ? - Janabato
२०७८ साउन २३ गते शनिवार ०९:१७ मा प्रकाशित
बुटवल । स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाको एउटा फेसबुक पोस्टले बिहीबार साँझ विश्व फुटबलका समर्थकहरु तरंगित भए । त्यो पोस्टमा भनिएको थियो, ‘लियोनल मेस्सी अब क्लबमा रहने छैनन् ।’
तिनै मेस्सी, जसले बार्सिलोना छाड्छन् भन्ने कमैलाई मात्र लागेको थियो । १३ वर्षको उमेरमा बार्सिलोना आवद्ध भएको र सफलताका थुप्रै इतिहास रचेका उनले बार्सिलोनाबाटै सन्यास लिने धेरैको अनुमान थियो । गत वर्ष क्लब छाड्ने चाहना त्यागेर पनि बार्सिलोनामा बसेका उनलाई अहिले अर्को क्लबले पनि कुनै अफर गरेको थिएन ।
तर बार्सिलोना र मेस्सीको पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएको छ भने नयाँ सम्झौता हुन सकेन । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले आफ्नो फेसबुक पोष्टमा भनेको छ, ‘क्लब र खेलाडी दुवै सहमतिमा पुगेको र उनीहरु आज (बिहीबार) नयाँ सम्झौता गर्न तयार भए पनि वित्तीय र संरचनात्मक अवरोधको कारण यो पूरा हुन सकेन ।’
क्लबको वक्तव्यले धेरैमा अन्योल पनि बढायो । खेलाडी र क्लब दुवै सम्झौताका लागि राजी हुँदाहुँदै किन हुन सकेन त सम्झौतामा हस्ताक्षर ? केही दिनअघि मेस्सी बार्सिलोनामा पहिलाको भन्दा आधा तलबमा बस्न तयार रहेको समाचार आएको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि बार्सिलोनासँग उनले सम्झौता गर्न नसक्नुका केही कारण उल्लेख गरिएको छ ।
१. ला लिगाको मापदण्ड
बार्सिलोना र मेस्सीबीच हुन लागेको भनिएको सम्झौताको बाधक ला लिगाको मापदण्ड फाइनान्सियल फेयर पे (एफएफपी) हो । यो नियममा क्लबले खेलाडीलाई कतिसम्म तलब दिन पाउने भन्ने तोकिएको छ, जुन क्लबको आम्दानीका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
अहिले बार्सिलोनाको आम्दानी कोरोना महामारीका कारण घटेको छ । त्यसैले बार्सिलोनाले उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ मेस्सीको तलब करीब २० करोड युरोले घटाउने निर्णय गरेको थियो । यसले पनि एफएफपीअनुसार भएन । किनकि बार्सिलोनामा एन्टोनी ग्रिजम्यान, उस्मान डेम्बेले र फिलिप काउटिन्हो जस्ता महंगा खेलाडी छन् ।
बार्सिलोनाको ऋण पनि मेस्सीसँग सम्झौता हुन नसक्नुको एक कारण हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको कारण बार्सिलोनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको छ । गत वर्ष महामारीकै कारण क्लबको आम्दानी १२ करोड ५० लाख युरो घटेको थियो । क्लब अहिले पनि करोडौं युरो बराबर ऋणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
स्पेनका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मेस्सीसँगको सम्झौताको कारण बार्सिलोनाको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए । नियमित तलबका साथै खेलमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा पाउने बोनस पनि उल्लेख्य हुने भएकाले उनलाई राख्दा क्लबलाई धेरै नोक्सानी भइरहेको केहीको तर्क छ ।
३. सीभीसीसँग कुरा नमिल्नु
लगानी कोष (सीभीसी)सँग स्पेनिस ला लिगाले हालै मात्र महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार बार्सिलोनाले २० करोड युरोभन्दा धेरै रकम पाउन सक्थ्यो र मेस्सीलाई क्लबमै राखिराख्न पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, यो रकम पाउन क्लबले सुपर लिगको योजना त्याग्दै ला लिगासँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने भयो ।
बार्सिलोना सुपर लिगको योजना त्याग्न तयार भएन । र, सीभीसीमार्फत उसले रकम नपाउने भयो । बार्सिलोनाले मेस्सी अब क्लबमा नरहने बताएसँगै ला लिगाको अर्को क्लब रियल मड्रिडले पनि ला लिगाको सीभीसीसँग सहकार्य नगर्ने बताएको छ ।
बिष्णु पौडेलले बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क बेचेको रहस्य खुल्यो